About Us -. Zhengzhou Prodigy chivaraidzo CO, Ltd
Umbwa Since 1999
Zhengzhou Prodigy chivaraidzo Equipment Co., Ltd
Business Type Mugadziri, Trading Company
nzvimbo Henan, China (Mainland)
Main Products Vatasvi itsva, carousel, kubhururuka cheya, Pirate chikepe, Ferris vhiri, bhamba motokari, vashanyire chitima, kuzvidzora ndege, dzandaienda atasve, hombe zvakavamba kuchinja, Samba ballon, kangaruru kusvetuka, datya kusvetuka, octopus, kofi mukombe nevamwe kutenderera Vatasvi.
Total Vashandi 201 - 300 People
Total Annual Revenue imwe US ​​$ 5 Million - US $ 10 Million
Year Chigaro 1999
Certifications BV, CE, SGS, CO, uye zvichingodaro
Zhengzhou Prodigy chivaraidzo Equipment Co., Ltdiri nyanzvi pasi nhandare kunopindirana nokuronga, chivaraidzo midziyo magadzirirwo uye mukugadzira. Tiri nhengo IAAPA uye China chivaraidzo Machine Association. Our chikuru zvigadzirwa zvinosanganisira Vatasvi itsva, carousel, kubhururuka cheya, Pirate chikepe, Ferris vhiri, bhamba motokari, vashanyire chitima, kuzvidzora ndege, dzandaienda atasve, hombe zvakavamba kuchinja, Samba ballon, kangaruru kusvetuka, datya kusvetuka, octopus, kofi mukombe nezvimwe kutenderera Vatasvi.
Yaiva Zhengzhou muguta China, Prodigy chivaraidzo vanoshandiswa mugadziri vakapakata kugadzirwa michina yemazuva ano uye nyanzvi kubasa. With simba Design dhipatimendi, R & D pakati, Washington City Offices workshop, Mechanical workshop, Soft Play workshop, Quality Control dhipatimendi, Operation Management centre, After-Sales Service dhipatimendi, Spare Parts yokuchengetera zvinhu uye zvichingodaro, ndiko kuti isu anopa vanokwanisa midziyo towana mubereko zvikuru vatengi edu kubva kuFrance, Algeria, Uzbekistan, India, Iran, Mongolia, Brazil, Philippines, Iraq, South Africa, Indonesia, uye dzimwe nyika dzakawanda.
Prodigy chivaraidzo ndiyo inozivikanwa wake Washington City Offices basa, unhu inotongwa kubva pakutanga chivezwa, Foroma kuti kupenda. 7 makorari chichiitwa, pamusoro muchiso motokari kupenda, High-sosaiti kupenda nzvimbo, kuti mavara shinning rakapedzwa zvigadzirwa yakasimba.
fekitari yedu uye zvigadzirwa vari certificated pamwe BV, CE, SGS, CO, uye zvichingodaro. Tine nyanzvi R & D chikwata yokukudziridza zvokuimba magadzirirwo nokudzora gadziriro. Tinogona kukubatsira kupfuura chero zvitupa kuti musika wako.
Prodigy chivaraidzo ari chaizvo kare vatengi kusarudza zvinhu zvedu, uye tariro kutanga takunda zvisamumirira pamwe ukama zvakawanda vatengi itsva. Pamwe chete, isu achasika zvakawanda kufadzwa uye mafaro vanhu munyika yose.
carousel, kubhururuka cheya, Pirate chikepe, ndege Vatasvi uye zvichingodaro 752 985 Set / Sets
Available Date --- mweya Date
CE Shenzhen BKC Testing Co., Ltd ose chivaraidzo Park Vatasvi 2017-04-17
bvumidzwa State Intellectual Property Office ose chivaraidzo Park Vatasvi 2017-04-17
chitupa rukudzo CAAPA chivaraidzo midziyo 2016-03-14
bhizimisi licence Zhengzhou Kutarisirwa Bureau kuti indasitiri uye zvokutengeserana chivaraidzo midziyo 2008-05-28 ~ 2068-05-27
Export Mode: Kuva Own Export License
Kwete revashandi muna Trade Department: 6-10 Vanhu
Copyrights All Reserved ne Prodigy Group.